အမှန်မြင်နှလုံးသား - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on December 12, 2011 at 4:30pm
ဟု တီးတိုးရေရွတ်လိုက်မိသည်၊ တစ်ပင်လုံးဝါနေသော အဲ…. နီနေသော မေပယ်လ်ပင်လေး၊ သတိထားမိသည်မှာ မနှစ်ကလည်း အဦးဆုံးရော်ရွက်ဝေခဲ့သည်၊ ယခုလို မတွေ့ဖူးလျှင် ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေသကဲ့သို့၊ အ၀ါမပီ အနီမကျ ရော်ရွက်တို့ ဖုံးလျက်၊ ပင်ချေတစ်ဝိုက် မြက်ခင်း စိမ်းစိမ်းပေါ်တွင်လည်း နီဝါရောင် ကော်ဇောခင်းသည်သို့၊...
“သစ်ရွက်ရော်ရည် ဣန္ဒနီဝယ်၊ သိင်္ဂီတစ်ဝက်၊ ဖက်၍ဆေးစုံ၊ ချယ်သောပုံသို့၊ ရဂုံမြိုင်တွင်း၊ တောလုံးလင်းသား.....” တစ်ပိုင်းတစ်စ ရနေသေးသော အင်းဝခေတ် စာဆို ရှင်ဥတ္တမကျော်၏ ကဗျာလေး နှုတ်မှာစီးခိုလာသည်၊ သိင်္ဂီတစ်ဝက် မြတစ်ဝက်ပေါ့၊ အနီတစ်ချို့ အစိမ်းတစ်ဝက် တင့်ဖက်လေသည့်အလှ၊ သည်အလှမျိုးကို မြင်ကာ အရှင်ဖွဲ့ခဲ့လေသည်ထင့်၊ နောက်ပြီး ရဂုံမြိုင်တွင်းတောလုံးလင်းသားတဲ့၊ မကြာမှီ Clarke square ဥယာဉ်လေးတစ်ခုလုံး အစိမ်းရောင်ကွယ်ကာ အ၀ါရောင်လွှမ်းတော့မည်၊ ထိုအခါ ကြည့်လေရာရာသည် တောလုံးလင်းလျှက်။
ရွက်ကြွေပြီးလျှင် အမိမြေမှာတော့ ပူပြင်းသည့် နွေရာသီ၊ သည်မြေမှာတော့ဖီလာ ဆန့်ကျင်၊ ရွက်ဝါတွေ ကြွေပြီးလျှင် စနိုးတွေ ဖုံးတော့မည်၊ Fall ခေါ် အော်တန်ရာသီ၊ အချမ်းကဲဝှန် အအေးသန်တော့မည်၊ ဥဏှတေဇော လောင်တတ်သလို၊ သီတတေဇော ကလည်း လောင်မြိုက်တတ် ပါကလားဟု သတိချပ်မိသည်။
အမိမြေမှာတော့ ခုလိုရွက်ဝါတွေကြွေလျှင် မြိုင်တစ်ကြောမှာ ဥသြ ဥသြ ငှက်ဥသြ ခွန်းဆင့်၍ လွမ်းသံနှောပေမည်၊ ပြီး ၀န်းကျင်တစ်ခို မြူမင်းလွင်တို့ ဝှေ့နေသည်မှာ မှုန်ရီပြာနှင့် လွမ်းတတ်သူတို့လွမ်းစရာ။
၀န်းကျင်မှာ မြူလေးတွေသန်းလျှင် “ဦးဇင်းပြန်ကြွလာတော့မှာပဲလို့ တပည့်တော်မဖြင့် လွမ်းသလိုလို ဘာလိုလို” ကိုယ့်အမေ၏စကားကို ကြားယောင်မိသည်၊ အမေ့ကို အမှတ်ရမိသည်၊ ဘာလိုလိုနှင့် အမေကွယ်လွန်သွားတာ ငါးနွေတောင် ကျူးခဲ့ပါပကော၊ အော်…. အမေ အမေ။
ရဟန်း မယ်တော်ပီပီ အရာရာကို တရားနှင့်ယှဉ်ကာ နှလုံးသွင်းတတ်သည့်အမေ၊ ခုလို တဖြိုက်ဖြိုက်ကြွေနေသည့် မေပယ်လ်ရွက်လေးတွေ ကိုတွေ့လျှင်၊ အော် တစ်နှစ်ကုန် ပြန်တော့မှာပါလား
တစ်နှစ်ကုန်ပြန် ငါ့ရုပ်နာမ် သေရန်တစ်နှစ်လွတ်ခဲ့ပြီ၊
တစ်နှစ်ရောက်ပြန် ငါ့ရုပ်နာမ် သေရန်တစ်နှစ် နီးချေပြီ၊
တစ်ရက်ကုန်ပြန်.....စသည့်ဖြင့် နှစ်လုံးသွင်းဆင်ခြင်နေမည်မှာ ဧကန်။
ကိုယ်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့ရသော ဓမ္မလင်္ကာလေးများ၊ ဇရာ ဗျာဓိ တစ်ခုခုနှင့် ဆုံတိုင်း အမေ့နှုတ်မှ စီးဖြာကျလာတတ်သည့် လင်္ကာသီတံလေးတွေ၊ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း
တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ကြီး အိုဖို့တစ်နေ့နီး၊
တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ကြီး နာဖို့တစ်နေ့နီး၊
တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ကြီး သေဖို့တစ်နေ့နီး၊ သံတူကြောင်းကွဲ လင်္ကာလေးတွေကို ကြားရ တတ်သည်။
အရာရာကို မမြဲချြင်းဖြင့် ယှဉ်၍မြင်တတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တို့၏နှလုံးစိတ်ရင်းကို အမေ့ထံမှ စတင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်၊ ထိုသို့ ရှု့မြင်တတ်မှုကိုလည်း အမေ့ထံမှပင် အမွေရ ခဲ့သည်။
ပန်းလေးတစ်ပွင့် ကြွေတာတွေ့လျှင်ပင် “ဖူးပွင့် နွမ်းကြွေ၊ ပန်းအနေသို့၊ အရှည်မကြာ တို့ခန္ဓာလည်း၊ ကြွေရမြဲသည်၊ မမြဲအနိစ္စပါတကား” ဟု ရှု့ဆင်ခြင်တတ်သည့် ကိုယ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အချို့က“အဆိုးမြင်ဝါဒီများ”ဟု သတ်မှတ်ချင်ကြသည်၊ အို နာ သေ အပျက်တွေကိုသာ ရှုတတ်သူများတဲ့၊ သူတို့ကတော့ အဖြစ်ကို ရှု့သည့် အကောင်းမြင် သမားများပေါ့။
အပျက်ကို ရှု့သူများအတွက်လည်း အဖြစ်နှင့် ဆုံရသလို၊ အဖြစ်ကို ရှု့သူများလည်း အပျက်နှင့်ကြုံရမြဲမို့ ကွာခြားသည် မထင်၊ တကယ်တော့ ကိုယ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် အပျက်ကိုသာမြင်လေ့ရှိသူများမဟုတ်၊ အဖြစ်ကို လျှစ်လျှုရှု့သူများလည်းမဟုတ်၊ အမှန်ကို မြင်သူများဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်နေသူများဟု ဆိုလိုက်ချင်ပါသည်။
အဖြစ်ချည်းသာ ရှု့သူအတွက် မည်မျှခိုင်ခံ့အောင် အားထုတ်ထားပါစေ၊ အပျက်နှင.် တိုးခဲ့သော် ဆောက်တည်ရာ မရဖြစ်တတ်သလောက်၊ အပျက်ကိုလက်ခံထားသူများ အတွက်မူ မတုန်လှုပ်၊ အဖြစ်ကို တဖန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း အပျက်မြင် သမားက တည်ငြိမ်လွယ် မည်ဟု ထင်မြင်မိပေသည်၊ အပျက်ပေါ်မှာ ရပ်တည်ရင်းဖြင့် အဖြစ်ကို တည်ဆောက်ကြ၍ လောကကြီးတိုးမြင့်လာခဲ့ခြင်းဟု ယူချင်ပါသည်၊ လတ် ဆတ်နေဆဲ အကြောင်းအရာတခုကို သာဓက ဆောင်ချင်သည်၊ ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲ သွားစေသည့် ပါရမီရှင်ဟု တိုင်း မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားသည့် Mr steve Jobs အကြောင်းပင်။
I နည်းပညာတို့၏ ဖခင်၊ Apple ၏အရှင်၊ သူ၏တီထွင်မှုတို့၏ တွန်းအားသည် သူ (၁၇) နှစ်သားအရွယ်က ဖက်ခဲ့ရသည့် “နေ့တိုင်းကို သင့်ဘ၀၏ နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် နေထိုင် ခဲ့လျှင် တနေ့မှာတော့ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ် ဆိုသည့်” ရှေ့သူဟောင်း စကားလေးနှင့်၊ “ဘ၀အတွက် အလွန်အရေးပါသည့်” ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချရာတွင် အရေးအကြီးဆုံးအထောက်အပံ့ ကိရိယာအဖြစ် သူတွေ့ရှိခဲ့သော အရာမှာ သေချြင်းတရားဟာ လက်တကမ်းမှာ ရှိသည်ဟု သတိချပ်ခြင်းပင်တဲ့။ standford university မှာ သူဟောပြောခဲ့သည့် စကားလေး။
သို့နယ်အကြောင်းတို့ကို ချင့်ထောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ အမြင်ဟာ အမှန်မြင်ဟု ဆိုလိုခြင်းပါ၊ ကိုယ့်အမေတို့ရဲ့ဝန်းကျင် အပေါ်ရှု့မြင်နှလုံးသွင်းမှုကိုလည်း ကိုယ်လေးစားမှုအသစ်ဖြစ်မိသည်၊ထိုသို.နှလုံးသွင်းတတ်အောင် လမ်းပြပျိုးထောင်ပေးတော်မူကြသည့် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာနှင့် ထေရ်သံဃာတို့ကိုလဲ ကြည်ညိုမဆုံး။
ထိုကြောင့် အဆိုးမြင်ဟု ဆိုဆို၊ အပျက်မြင်ဟု ပြောပြော၊ မလွဲကြုံရမည့် သဘောတို့ကို ရုတ်ချည်းတွေ့ကြုံလာလျှင် မတုံလှုပ်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပေမည်၊ ယဉ်ပါးနေခြင်းသည် စိမ်းကားနေခြင်းထက် အသုံးဝင်သည် မဟုတ်ပါလား၊ အဘိဏှသုတ်လို နေ့ည မပြတ် နှလုံးသွင်းဖွယ်တွေကို ဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့သည်မှာ အများအပြား၊ အင်း .... ဆင်ခြင်မှ ဆင်ခြင်မှ.........
တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ကြီး အိုဖို့တနေ့နီး..
တစ်လကုန် တစ်လကြီး .....
ကလေး တသိုက်၏ အော်သံကို ကြားလိုက်မှ ပန်းခြံထောင့် ကလေးကစားကွင်းနားကို ရောက်နေတာ သတိထားမိသည်၊ လှမ်း၍ကြည့်လိုက်တော့ ဆော့စကားနေကြသော ကလေးတသိုက်၊ အမေရိကန် မက်ဆီကန်နှင့် လူမဲ ကလေးငယ်များ၊ ထိုလူမဲ ကလေး များကိုမြင်မှ အင်း...ဒင်းကလေးတွေ ပေါ့၊ ရုတ်ချည်း မနှစ်က အဖြစ်အပျက်လေး တခုက ပေါ်လာသည်၊ သည်အမေရိကကို ရောက်စ၊ တစ်ကိုယ်တည်း နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် ဒီပန်းခြံလေးကို ပတ်ကာလမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ တစ်ညနေမှာတော့ နောက်မှ ခြေသံတွေကိုကြားရသည်၊ ကိုယ့် အသွင်စိမ်းကို စကြ နောက်ကြလေ မလားဟု တွေးနေတတ်သော ကိုယ်အဖို့ နောက်မှ ရုတ်တရက်
“၀မ်း တူး သရီး Bigboss”
ကိုယ် လန့်သွားသည်၊ ဘာကို အော်လိုက်ပါလိမ့်၊
“Bigboss” တဲ့၊ ဘာလဲ Bigboss၊ အပြေးအလွှား စဉ်းစားကြည့်မိသည်၊ big ကြီးသော Boss သူဌေးကြီးပေါ့၊ နေ့စဉ်လိုလို အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်နိုင်သော ကိုယ့်ကို သူတို့လေးတွေက Bigboss ကြီးဟု မြင်ကြသည်ထင့်၊ လှည့်ကြည့်မိတော့ ထင်သည့်အတိုင်းပင်၊ လူမဲလေး ၄ယောက်၊ မတိမ်းမယိမ်း၊ Money Money ဟု တောင်းခံနေကြသည်၊ ကိုယ် ရယ်ချင်သွားမိသည်၊ တစ်ဒေါ်လာစီ ပေးအံ့ဟု အိပ်ကို စမ်းမိတော့ ပါမလာ၊ ဘယ်လိုပြောရပါ့၊ မတတ်နိုင်၊ ကိုယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်ကျွမ်း ထားသည့် တလုံးတည်းသော အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရဖြင့် တုန့် ပြန်လိုက်သည်၊ NO,
သည်တော့မှ မောင်မင်းကြီးသားလေးတွေ ရပ်ကျန်နေခဲ့သည်၊ ကိုယ်တည်းပြုံးရင်း ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်၊ သူဌေးကြီးတဲ့၊ ထင်မှထင်တတ် ပလေ၊ မောင်ရင်လေးတို့ ရယ်၊ ကိုယ်ဟာလဲ မင်းတို့မိဘတွေလို ပေးမန့် တွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရသူပါ၊ ရင်ထဲမှာ တီးတိုး ပြောဖြစ်ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရမိသည်။
တစ်ချက်ရယ်လိုက်မိပြီး၊ ဒီမောင်မဲလေးတွေ အခုတော့… အဲ… သူတို့လုပ်တာနှင့် ဆင်ခြင်လာသည့် တရားလေးတွေတောင် ပျောက်သွားပြီ၊ ကဲ… ဆင်ခြင်အုံးမှ ဆင်ခြင် အုံးမှ ဘာတဲ့…
တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ကြီး “ပေးမန့်” တစ်နေ့နီး အဲ.. ဟုတ်ပေါင် .....
10၊ 30၊ 2011